फेरि २५ दिन सम्पुर्ण बजार,यातायात बन्द रहने गरि लकडाउन गरिने, भर्खरै भयो यस्तो निर्णय ! हेर्नुहोस – AB Sansar
October 1, 2020 adminLeaveaComment on फेरि २५ दिन सम्पुर्ण बजार,यातायात बन्द रहने गरि लकडाउन गरिने, भर्खरै भयो यस्तो निर्णय ! हेर्नुहोस
काठमाडौँ- दशैँ, तिहार तथा छठ मुखमा फेरि लकडाउन हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ । सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या २५ हजार भन्दा धेरै भए देशको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न सक्न नसक्ने भन्दै लकडाउन गर्नुपर्ने निश्कर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पुगेको छ । तीन दिनअघि गरेको नियमित प्रेस ब्रीफिङमा स्वास्थ्यमन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेसँगै सर्वसाधरणमा फेरि लकडाउन हुनसक्ने आशंका बढेको छ । यसबीच स्वास्थयमन्त्रालयका प्रवक्ता सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले “धेरैको चासो यतिखेर दशैँ-तिहारमा फेरि लकडाउन गरिन्छ कि भन्नेमा छ। तर त्यसको जबाफ त्यही २५ हजारको सीमासँग जोडिने” बताएका छन् । *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
लोकप्रिय गायिका रचना रिमालको यस्तो छ झापामा रहनसहन र बासस्थान !
दु:खद खबर को’रोना सं’क्रमितको उपचारमा खटिएका २६ वर्षीय डा.सुभम उपाध्यायको कोरोनाबाटै मृ’त्यु